Ukwaziswa kwe-UChicago: Izikolo ze-SAT, Imilinganiselo yokwamkeleka nokunye
IYunivesithi yaseChicago Admissions Overview
IYunivesithi yaseChicago ine-admissions ekhethekileyo. Inani lokumkela iipesenti eziyi-8 ngo-2016 lenza kube enye yeekholeji ezikhethileyo kwilizwe. Uya kudingeka amanani kunye nokulinganisa okulinganiselweyo kumgangatho wokuba ungene. I-admissions yeyunivesiti iyonke , ngoko ke imisebenzi yexesha eliqhelekileyo , iincwadana zesicelo kunye neencwadana zengcebiso zibaluleke kakhulu kwinkqubo.
IYunivesithi yaseChicago I-Acceptance Rate: iipesenti eziyi-8
Chicago GPA kunye neGraphic Score Graph
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 720/800
ISAT Math: 730/800
Uthelekiso lwamanani ophezulu weyunivesiti SAT
Iifomfa ze-SAT zase-Illinois eziphezulu
UMTHETHO UMathe: 31/35
Iyunivesithi ephezulu ye-ACT yomlinganiselo
Iikholeji ze-Illinois eziphezulu ze-ACT
IYunivesithi yaseChicago Incazelo:
Kutholakala kwi-Hyde Park, malunga neekhilomitha ezili-7 ukusuka kwiDevelopment Chicago, iYunivesithi yaseChicago yenye yeyona ephakamileyo ye-universities e-US Nangona isikolo sele sibafundi ababini abaphumelele njengesikolo, iiprogram ze-undergraduate zihlonishwa kakhulu kwaye Uninzi lwabafundi luya kugqiba isikolo.
Iingcali zesayensi, isayensi kunye noluntu zonke ziqinileyo. Iyunivesiti inokuziqhayisa ngesahluko sePhi Beta Kappa kunye nobulungu kuMbutho weeMerika zaseYunivesithi. Abafundi bonyaka wokuqala kwiYunivesithi yaseChicago bahlala kwenye "izindlu" ezingama-38 ezikhonza njengeziko lobomi bomfundi. Izifundo ziyaxhaswa ngumyinge obalaseleyo we-6 ukuya ku-1 womfundi / umlinganiselo wezakhono .
Kwi-front yezemidlalo, iYunivesithi yaseChicago Maroons incintisana kwiCandelo le-NCAA Division III, kwi-University Athletic Association (UAA). Imidlalo evelele ibandakanya ibhola lebhola, ibhola lebhola, ukubhukuda, ithenti, kunye nomkhondo kunye nomhlaba.
Ubhaliso lwabonke: 15,775 (6,001 izifundo zakudala)
Isifundo kunye neMali: $ 53,649
Iincwadi: $ 1,800 ( kutheni na? )
Igumbi neBhodi: $ 15,093
Ezinye iindleko: $ 2,175
Iindleko ezipheleleyo: $ 72,717
IYunivesithi yaseChicago yoNcedo lwezeMali (2015 - 16):
Ipesenti yabafundi abafumana uncedo: iipesenti ezingama-67
Izibonelelo: ama-64 ekhulwini
Imali: 8 ipesenti
Izibonelelo: $ 39,032
Imali: $ 10,964
I-Popular Majors: I- Biology, i-Economics, isiNgesi, iMbali, iMathematika, iNzululwazi yezopolitiko
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): iipesenti eziyi-100
Ireyithi yokuQiniswa kweNyaka-4: iipesenti ezingama-89
Imidlalo Yabantu: Umkhondo kunye neNkundla, Ibhola, Ibhola lebhola, Ukubhukuda, I-Tennis, Ukulwa, iBhola yeBhola, iBhola
Imidlalo yabasetyhini: Ibhola lebhola, Ukubhukuda, i-Softball, iTennis, iBhola yeBhola, Umkhondo kunye neNgqimba, iVolleyball
IYunivesithi yaseChicago kunye neSicelo esiQheleleyo
IYunivesithi yaseChicago isebenzisa isicelo esiqhelekileyo . La manqaku angakunceda ukukukhokela:
Ukuba uthanda iYunivesithi yaseChicago, Unako ukungafani nalezi zikolo:
'Imibuzo yoFundo kunye neNgxoxo' ka-1984
I-Kean University Admissions